Element ovundlile uhlobo elihambayo womoya nge isakhiwo eziphambili, it has a ukusebenza kahle eliphezulu athula ngokusebenzisa fluidization futhi ingcindezi okuphakelayo ubuchwepheshe nombhede elihlukile fluidized.
SjGJD060-3GStepped Type Dry Mortar batching isitshalo
I-SjGJD060-3G inyathele uhlobo lohlobo olomile lokuthwebula imishini isebenzisa isakhiwo sohlobo olunyathelwe phansi, olunezimpawu zokukhiqiza okukhulu, ukuzinza nokuthembeka, futhi lungasetshenziselwa ukuxuba udaka olujwayelekile owomile nosimende okhethekile owomile.
[Kopisha] Isihlukanisi sesihlabathi
Ukwamukela ubuchwepheshe obuhlanganisayo bokuhlukaniswa kwesigubhu nokuhlolwa okuvunguza nokuhlukaniswa, nokuqhubeka nokuhlukaniswa ngamatshe amatshe; ngokuhleleka nje, umphumela wokuhlukanisa kahle, izindleko eziphansi zokusebenzisa kanye nenzuzo enhle yokuvikelwa kwemvelo.
Ukhonkolo Truck Mixer 4 × 2
IShantui Janeoo ibilokhu ithuthukisa futhi ikhiqiza mixer yamaloli kakhonkolo kusukela ngawo-1980. It anqwabelene isipiliyoni ocebile design, yokukhiqiza futhi emva-sales service.
I-Sjgtd060-3g imishini yokugoqa udaka eyomile isebenzisa isakhiwo sombhoshongo, ngokukhiqiza okukhulu, ukonga amandla nokuvikelwa kwemvelo, izici ezizinzile nezinokwethenjelwa, ezisetshenziselwa ikakhulukazi ukuxuba udaka olujwayelekile olomile.
Ukhonkolo Truck Mixer 6 × 4